बेलायतबाट भित्रिएका दुई सय ३५ जना निगरानीमा, स्वाब लिएर आनुवंशिक अध्ययन गरिँदै
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजबेलायतबाट भित्रिएका दुई सय ३५ जना निगरानीमा, स्वाब लिएर आनुवंशिक अध्ययन गरिँदै
विराटनगर । बेलायतमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि उक्त मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका २ सय ३५ जना नागरिक निगरानीमा परेका छन्। १४ जना क्वारेन्टाइनमा छन्।
उनीहरूको स्वाब नमुना संकलन गरी नेपालमा नयाँ भाइरस प्रवेश भए÷नभएको अध्ययन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले बेलायतबाट सीधै र अन्य मुलुकबाट बेलायत ट्रान्जिट हुँदै आउने नागरिकलाई निगरानीमा राखिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले बुधबार बसेको नयाँ भाइरसको स्वरूप नेपालमा भित्रिएको छ÷छैन भन्नेबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले बेलायतबाट आएका व्यक्तिको नमुना लिएर जिन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया सुरु गरिने बताए। ज्ञवालीका अनुसार दोस्रो पटक गर्न लागिएको आनुवंशिक अध्ययनमा ४०/५० वटा स्याम्पल लिएर अध्ययन गरिँदै छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ
अध्ययन निगरानी बेलायत